भुइँमान्छेबाट राजनीतिको टाकुरामा पुगेका महरा कसरी षड्यन्त्रमा परे ? हेर्नुहोस पुरा बिवरण - Nepal Talk
आश्विन २५ गते, २०७६ मा प्रकाशित
आनन्द पुन , काठमाण्डौं, भुइँमान्छेबाट राजनीतिको टाकुरासम्म पुग्नका लागि महराले देशमा माओवादी पार्टीका माध्यमबाट क्रान्तिको शंखघोष मात्रै गरेनन्, प्रत्यक्ष रुपमा त्यो आन्दोलनको नेतृत्व लिए । युद्धकालीन कठिन संघर्षहरूलाई सहजै जितमा रुपान्तरण मात्रै गरेनन्, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादी आन्दोलनको सफल अवतरण गर्ने कठिन मोर्चाको नेतृत्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे । लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेका कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीले महरामाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएपछि उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रयासको आरोप लागेपछि पक्राउ परेका महराको बाल्यकाल देखी राजिनामा दिंदा सम्म भएको महराको बास्तबिकतामा नेपाल टकको बिशेष रिपार्ट ।
सानो खोचमा रहेको सुन्दर रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम नजिकैको गाँउ लिवाङको धारापानीमा २०१५ साल असार महिनामा पिता रबिचन्द्र महरा र आमा समुन्द्रादेवीको एक्लो सन्तान हुन कृष्ण बहादुर महरा । गाँउको सामान्य परिवारमा जन्मलिएका कृष्ण बहादुर महराको बाल्यकाल दुखै दुखमा बित्यो । बाल्यअबस्थामै आमा गुमाउनुको पिडा त कस्ले पो बिर्सन्छर ?
अध्ययनमा प्रेरणा र औपचारीक शिक्षा
आफ्नै साना बुबा र फुपाजुबाट अध्ययनमा पे्ररणा पाएका महराले गाँउको वाग्गेस्वरी पाठशालाबाट प्रारम्भिक शिक्षा हाशिँल गरेर कक्षा ७ र ८ को अध्ययन भारतको बिहारमा गरेपनि माध्यमिक तह सम्मको अध्ययन गाँउमै पुरा गरे । गाँउकै स्कुलबाट २०३३ सालमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास भएसँगै क्याम्पस पढने ढोका उघारेका महराले नेपालगन्जको कृषी क्याम्पसबाट आई ,एस्सीमा छात्रबृतिमा पढेर केहि बर्ष शिक्षण पेसा गरेर पोखराको पिएन, क्याम्पसबाट बि, एड पास गरेसँगै औपचारीक शिक्षमा पुर्ण बिराम लाग्यो ।
सामान्य औपचारीक शिक्षा हासिल गरेकी ईमान्दार र सोझी घरपरिवारले नै मागेकी सिता संग २०३७ सालमा बिहे गरेका महराका दुई छोरी उन्नती महरा , प्रगती महरा त्यसैगरी दुई छोरा निर्मल महरा ,क एटम र राहुल महरा छन । उनिहरु सबैले १० बर्षे जनयुद्धमा संलग्न थिए ।
महराको राजनितीक जिवनको शुरुवात
तात्कालिन अबस्थामा रोल्पा रुकुममा हुने गरेका शोषण , दमन र उत्पिडन भैरहदा त्यसको कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने चिन्तामा परेका महरा तात्कालीन राज्यसत्ताले खास रुपमा नयाँ निकास दिन सकिरहेको थिएन , समाजमा हुने बिकृति ,बिसंगती बिरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने सोच राखेका महरा ३०३६ सालको बिधार्थी आन्दोलनबाट राजनितिमा लागेको भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालगन्ज पढदा पन्चायत बिरुद्ध लडने भनेर ने, बि संघको इकाई कमिटीमा ६ महिना गरे संगै सामाजिक असमानताले बिद्रोही स्वभाबका महरा समयसंगै कम्यिनिष्ठ बन्न पुगे । कृष्ण शेन इच्छुकबाट प्रभाबित महरा उनकै सहकार्यले उनि कम्यिुनिष्ठ बनेका थिए । इच्छुकबाट आफुले लगेर पढेका किताबहरु चिनको चम्किलो तारा ,गुनिला कथाका मोड , योमा उपन्यास अहिले पनि महराको बाकसमा सुरक्षित राखेका उनका जेठा छोरा एटमले कुनै प्रसंगमा बताउछन ।
पहिलो पटक संसद बन्दाको अनुभब
२०३८ शिक्षक बनिसकेका महरा शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएर शिक्षक आन्दोेलनमै क्रियाशिल रहन पुगे । २०३८ सालमै पार्टीको सदस्यता पाएसंगै कम्यिुनिष्ठ राजनितिमा क्रियाशिल महरा २०३८ सालकै पन्चायती चुनाब बहिस्कार गरेवापत २ बर्ष सदरमुकाम लिवाङमा जेल बस्नु बसेका थिए । जेलबाट छुटे लगत्तै फेरी आन्दोलनमा होमिएका महरा तत्कालिन मसालको रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी भएका महरा २०४८ सालमा संसद बन्न सफल भए ।
एकपछि आर्को राजनैतिक खुडकिलो चढदै गरेका महरा २०५२ बाट पार्टी केन्द्रिय समिती सदस्य भए संगै चौथौ बिस्तारीत बैठक पछि पोलिटब्यरो सदस्य भएका थिए । पार्टीमा बरिष्ठ नेता मोहन बैध किरण पक्राउ परेलगत्तै उनि पार्टी प्रबक्ता भए । तत्कालिन जनयुद्ध सुरु भएसंगै करिब ६ बर्ष जति राप्ती अन्चल ईन्चार्ज को भुमिकामा रहेसंगै उनको रानजैतिक पकठ अझ बलियो र बिस्तार भएको बुझिन्थ्यो । त्यसताका उनलाई महरा भन्दा पनि अमरसिंह नामले उनि पार्टीमा चिनिन्थे ।
०४८ सालमा संसदिय चुनाबको भण्डाफोर नीति लियर चुनावमा भाग लिएपछि तत्कालिन राज्य , सरकारका कतिपय गतिबिधिहरु राष्टिय , अन्तरराष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रियता बिरोधी , प्रजातन्त्र बिरोधी र जनजिबिका बिरोधी देखिएपछि त्यसका बिरुद्द आक्रोशित हुँदै अब बिद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पाटी‌ पुगेको थियो । तत्कालिन अबस्थामा महरा पनि रोल्पाबाट संसद बनिसकेका थिए । तर जबपार्टीले जनयुद्द शुरु गर्ने रणनिती बनायो त्यसबेला उनी रोल्पा जिल्लाका सेक्रेटरी भैसकेका थिए ।उनी सैक्रेटरी भएकै बेला तत्कालिन अबस्थामा सरकारले सोमियो अप्रेशन जस्तो बृहत् खालको प्रहरी अप्रेशन सुरुगर्दैगर्दा उता महरा भने त्यसको भण्डाफोर अभियानमा मुठ्ठि कसेर लागिपरे ।
खास गरि जनयुद्द कालमा माओबादी जनयुद्द सुरु गर्दा रुकुम ,रोल्पालाई नै आफ्नो आधार ईलाका मानेर अभियान सुरु गरेका कारण पनि सरकारले त्यहि रोमियो अप्रेशन सुरु गरेको जानकारहरु बताउछन । उता महरा आफ्ना पार्टीकै गतिबिधिलाई तिब्रता दिईरहेकै बेला आर्को तिर सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई झुट्टा मुद्दा लगाउने दुख दिने काम भएपछि अझ माओवादीलाई लडाईलडन सहज भएको बुझिन्छ ।
संगसंगै जनयुद्दको आधार भुमि देखेपछि पार्टीले अब युद्द शुरु गर्नुपर्छ त्यसका निमित्त राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिष्थितिको विश्लेषण गरेर देश भित्रबाट माओबादीलाई दह्रोसंग पक्डिदै जनयुद्दको बाटो अपनाउने भनेर राजनैतिक तयारी ,संगठनिक तयारी , भौतिक, आदी तयारी गर्न महरा संग पुर्व प्रधानमन्त्री तथा हालका नेकपा अध्यक्ष तथा तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड रोल्पा पुगेको महराका बताउछन ।
तयारीका समग्र पाटाहरूलाई लियर वर्गसंघर्षको ब्यवहारिक अनुभव संगाल्दै जनयुद्दको तयारी गर्ने ब्यक्तिमा एकजना महरा महत्वपर्ण ब्यक्तिमा पर्दछन । सैन्य अभ्यासको हकमा प्रतिरक्षा कसरी गर्ने , आफ्ना बिरूद्दमा आउने दुस्मनलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने , शारिरिक मानशिक रुपमा कसरी तयारी गर्ने भन्ने पुर्ण योजना महराले नै बनाएका थिए । त्यस अनुरुप प्रचण्ड र हालका गृह मन्त्री राम बहादुर बादल संग मिलेर सामान्य खालको लडाकु दल निर्माण गरेको महरालेआफ्नो अनुभवमा शान्ती प्रक्रियामा आउदा सबै पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । त्यसपस्चात सामान्य घरेलु हतियारबाट सुरु भएको युद्दले क्रमैसंग तत्कालिन अवस्थामा माओबादीले देख्ने दुस्मण अर्थात सरकारका पहिला प्रहरी पछि सेना संग आक्रमण गर्ने र हतियार खोस्ने लक्ष केही हद सम्म पूरा गरेको थियो । कारबाहीका क्रममा रोल्पाको होलेरी आक्रमण गर्दा र रुकुम रोल्पाको जनयुद्दको सुरुवातीमा महरा आफै रोल्पा , रुकुम विशेष कमिटीको ईन्चार्ज थिए ।
२०५२ साल फाल्गुन १ गते जनयुद्द शुरु हुनु अगाडि पहिले पुषमा नै रोल्पा रुकुम मात्र पार्ट्रिको एउटा विशेष कमिटि थियो । त्यसलाई पार्टीको विशेष ब्युरो मानिन्थ्यो । २०५२ साल पुसबाट भुमिगत जीवन सुरुवात गर्दै गरेका महरा परिवारलाई सम्झाएर नै निस्नेको थिए । महरा भुमिगत भएको १५र २० दिन पछि तत्कालै त्यसबेलाको राज्यसत्ताले महराको परिवारमाथि आक्रमण र गिरफ्तारी , कुटपिट आदी संगसंगै घरमा बारम्बार खानतलासी गरि दुख दिन थालेपछि २०५३ साल सावनमा प्रहरीको ठुलो अप्रेशनलाई छल्दैछल्लै उनकी जिवनसंगिनी सीता महरा पनि दुई छोरी दुई छोरा च्यापेर युद्दमा नै होमिईन । त्यसबेला साबिक वाईसियल नेपालका कोषाअध्यक्ष तथा हाल राष्ट्रिय युवा संघका केर्द्रिय सदस्य राहुल महरा ३ बर्षका मात्र थिए ,भने ठुली छोरी उन्नती महरा १५ बर्षकी मात्र थिईन ।
जयुद्दमा संगै पढने संगैका साथी तेजमान घर्ती , किमबहादुर थापा क, सुनिल , गोर्खाका सुरेश वाग्ले , आदी साथिहरुको साहदत्तलाई जिवनकै दुखद अनुभुति महरा बताउँछन ।
प्रचण्ड संगको पहिलो भेट
२०४० सालमा जुनबेला उनी पृथबिनारायन क्यम्पसमा पढथे त्यो बेला प्रचण्डसंग भेट भएको उनी बताउछन । त्यतिबेला प्रचण्ड युवा संघको अध्यक्ष भएकोले दुबै जनाको राम्रो उठबस भएपस्चात पछि २०४३ सालमा एउटा प्रशिक्षणमा भेट भएको थियो । पछि २०४८सालमा ३ बर्ष काठमाण्डौँ बस्दा राजनैतिक हिसावले बैचारीक हिसावले र सांगठनिक हिसावले एक भएपस्चात जनयुद्दमा निरन्तर सहकार्य गरेको महरा बताउछन
प्रचण्डसंग अन्तिम भेट
गत असोज १२ गते रोशनी र महरा प्रकरण बाहिरियसंगै १३ गते वालुवाटारमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डसंगै भएका बेला अन्तिम भेट थियो प्रचण्डसंग । सो घटनाका बारेमा पार्टी अध्यक्षद्वयले त्यस बिषयमा सोपधपुछ गर्दा महराले आफु त्यसमा संलग्न नरहेको भनी जवाफ दिएर महरा निस्किएका थिए ।
रोल्पालाई त्यो आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्न लगाउने अगुवा अरु कोही नभएर उनै कृष्णबहादुर महरा थिए । उनको भट्टीबाटै उत्पादन भएका उनका विद्यार्थी र कार्यकर्ताले नै आजसम्म त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उनको एक आहवानले सम्पूर्ण जीवनलाई बलिवेदीमा चढाउन हजारौँ होइन लाखौँ नेपालीका छोराछोरी तयार भएका थिए । र त त्यो आन्दोलनले राज्यसत्तालाई धक्का दिने अवस्थासम्म आइपुगेको थियो । मूल नेतृत्व तहमा उनीभन्दा माथि केही नेताहरू रहेका भए पनि वस्तुतः त्यो आन्दोलनको वास्तविक नेतृत्व उनैले गरेका थिए ।
किनकि सबैभन्दा बढी लडाकू कर्याकर्ताको पंक्ति उनकै भट्टीबाट खारिएर आएकाहरू थिए र छन् । सायद त्यस्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण मोर्चाको नेतृत्व सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भएरै होला, अनेकन अप्ठ्यारा घुम्ती र जंघारहरूको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै होइन, त्यो आन्दोलनका सबै नेताहरूको आवश्यकता उनै महरा बनिदिन्थे ।
युद्धकालमा शान्ति वार्ताको नेतृत्व गर्ने मात्रै होइन, युद्धका अनेकन भयानक मोर्चाको नेतृत्व पनि महराले नै गरेका थिए । त्यो आन्दोलनमा लागेका केहीले यसअघि नै महराले अवसरै अवसर पाएको भनी गनगन पनि नगरेका होइनन् । तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महराले जे जति भूमिका, नेतृत्व र अवसर पाए, त्यो कसैको दया मायाले पाएका थिएनन् ।
त्यो त त्यो आन्दोलनको आवश्यकता र जस्तोसुकै चुनौती पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने उनको शालीन नेतृत्व क्षमताका कारण पाएका थिए । यसरी हेर्दा गृह, अर्थ र परराष्ट्र मात्रै होइन संसदीय मोर्चाको नेतृत्व पनि उनैले पाए । तर ती सबै नेतृत्व उनको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व र अब्बल कार्यशैलीका कारण प्राप्त गरेका थिए । यहाँनिर भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्ने छैन ।
के हो रोशनी, महरा प्रकरणको वास्तविकता ?
महराले अनेकौँ संघर्षहरूको वीरतापूर्वक सामना गरेका उनै महरा यतिबेला अत्यन्तै घीनलाग्दो आरोपको एक्लै विनम्रतापूर्वक सामना गरिरहेका छन् । माओवादीले आन्दोलनको पटाक्षेप गर्दैगर्दा आज देशमा चलिरहेको संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनी आरोप लगाउने गरेको थियो । हो यस व्यवस्थाभित्र अनेकन जालझेल हुने गर्छन् । दृश्यभन्दा धेरै अदृश्य षडयन्त्रहरू हुने गर्छन् । लडाइँ घोषणा गरेर कहिल्यै हुँदैनन् । तर हरेकले अर्कालाई सिध्याउन पलपल लडाइँ भइरहेको हुन्छ ।
फरक यति हो, युद्धमा घोषणा गरेर ताकीताकी छातीमा गोली दागिन्छ । तर, यहाँ अँध्यारो कोठाभित्र षड्यन्त्र रचिन्छ र अघोषित रुपमा पिठयुँ मा छुरा धसिन्छ ।
जे भएको हुन्छ, त्यो कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैन । तर दुनियाँलाई देखाउनका लागि कुनै बुख्याँचा खडा गरिन्छ । मदन भण्डारीको हत्यादेखि राजा वीरेन्द्रको वंशनाससम्मका घटना यस्तै षड्यन्त्रका उपज हुन्, जुन पहेलीहरूका गुत्थी आज पनि कसैले सुल्झाउन सकिरहेका छैनन् । दुनियाँको नजरमा मदन भण्डारीलाई त्रिशूलीमा फाल्न अमर लामालाई र राजा वीरेन्द्रको वंशनास गर्न उनकै छोरा स्वर्गीय युवराज दीपेन्द्रलाई बुख्याँचाको रुपमा खडा गरिएको थियो । जनताले कहिल्यै ती घटनाका सन्दर्भमा बाहिर ल्याइएका विवरणप्रति विश्वास गरेनन् र सायद गर्नेपनि छैनन् ।
सायद नियतिको परिवन्दले आज राजनीतिको टाकुरामा पुग्नै लागेको एक योद्धालाई पनि रोशनी शाही नामको एउटा बुख्याँचालाई खडा गरी गल्र्यामगुर्लम ढाल्ने साजिस रचिएको छ । सायद यस नाटकको प्लट पनि कुनै अँध्यारो कोठामा तयार गरिएको थियो र महराको पिठ्युँमा छुरा धसुन्जेल यस विषयको भनक समेत कसैलाई दिइएन । जसरी ६१ वर्षीय कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको अरोप लगाएर दसैँ बिदाका बखत अदालत खोल्न लगाएर कस्टडीमा कोच्ने काम भएको छ, त्यो कुनै सामान्य योजना र तयारीमा भएको होइन ।
यद्यपि आरोप लगाएको १२ घण्टा नपुग्दै उनी आफ्नो बोलीबाट फिर्ता मात्रै भइनन्, आफैँ उपस्थित भएर त्यस्तो कुनै गलत सम्बन्ध नभएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिन पुगिन् । तर उनको दोस्रो दिनको कुरालाई विश्वास नगरी अघिल्लै दिनको सन्दर्भमा जाने हो भने पनि न त्यहाँ बलात्कार भएको छ, न त्यस्तो प्रयास नै भएको छ । बरु आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग गर्ने आफ्नै कार्यकर्तालाई गरेको सहयोगको बदलामा महराले नै दुव्र्यवहार भोेगेका छन् ।
शाही र महराबीच त्यस्तो केही थियो भने पनि त्यो दुवैको सहमति र इच्छा अनुसार भएको थियो । या भनौँ यो उनीहरू दुई जनाबीचको नितान्त व्यक्तिगत जीवन थियो । सहमतिमा त्यो अघि बढुन्जेल रोशनी शाहीलाई कुनै समस्या भएन । तर जब उसले उठ् भन्दा महरा उठ्न सक्ने अवस्था भएन, बस् भन्दा बस्न सक्ने अवस्था रहेन, हो त्यसपछि उनले महराको पद प्रतिष्ठाको साहारा लिएर निरन्तर ब्ल्याकमेल गरेको देखिन्छ ।
यो त दुनियाँलाई पक्का भइसकेको छ कि त्यो दिनको घटना एक्कासी भएको थिएन र महराले बलात्कार प्रयत्न गरेका होइनन् । किनकि उनीहरूबीच दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पारिवारिक सम्बन्ध थियो । आत्मीय भावना थियो । युद्धकालमा महराको परिवारको सहाराको रुपमा शाहीले सहयोग गरेकी थिइन् ।
दुवैजनाले त्यस्तो कुनै खराब सम्बन्ध नरहेको स्वीकार गरिसकेका छन् र राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान प्रक्रियासमेत बढाइसकेका छन् । तर यस कुरामा कुनै माथापच्ची गरिरहनुपर्ने छैन कि उनीहरू दुवै जना राम्रा साथी थिए । साथीभन्दा बढी केही थिए भने पनि दुवैको खुसी र इच्छाका लागि सहमतिमा थिए ।
हाम्रो आशय बलात्कार भए कोही मानिस उम्किनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । तर सहमतिमा चलेको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई अनेकन षडयन्त्रहरूको तानाबानामा लागेर जब अरु कसैले लेखिदिएकै प्लटका आधारमा बलात्कार भएको नाटक गरिन्छ भने त्यसको पटाक्षेप हुनुपर्छ र कसैमाथि पनि अन्याय हुनुहुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो ।
पहिलो कुरा त शाही स्वयंले महरा र आफ्नाबीच पिता–छोरीको सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरिसकेकी थिइन् भने महरा स्वयंले पनि आफ्नो परिवारिक मित्र तथा स्नेही विद्यार्थी र त्यसभन्दा पनि ज्यादा आफ्ना दुःखका दिनमा सहयोग गरेकी एक कार्यकर्ता हुन भनिसकेका छन् ।
मूलतः आमाको मृत्यपछि विक्षिप्त बनेकी शाहीलाई संकटको बेला जीवनको लयमा फर्किन एउटा अविभावकको काम महराले गरेका थिए । उनी कुनै सामान्य मानिस पनि थिइनन् । मानसिक रुपमा असामान्य रहेकी, यसअघि पनि आत्महत्याको प्रयास गरिसकेकी र यतिबेला पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधि सेवन गरिरहेकी मानिस थिइन् ।अब उनको पारिवारिक मित्र हुन् र एक अर्काको घरमा आउने जाने क्रम त्यो दिन होइन, वर्षौदेखि चलिरहेको थियो भन्ने कुरा त उनीहरू दुवै जनाले आफैँले भनिसकेका छन् ।
महरा र रोशनीबीच के थियो के थिएन, अब त्यसबारे खोजबिन गर्ने काम राज्यका निकायहरूको हो । तर अनुसन्धानका पाटाहरूले निर्दोष सावित गरिदिए अनि अदालतले अरोप निराधार सावित गरिदिए अहिले महरामाथि राज्यले जे जस्तो अपमान र अन्याय ग¥यो यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ रु बाँकीले त महरालाई सिध्याउन षडयन्त्र गरे र सफलता पनि हासिल गरे ।
षड्यन्त्र कहाँबाट कसरि भयो ?
महरा प्रकरण भए लगत्तै सबै भन्दा प्रहरीले प्रधान मन्त्री भन्दा पहिला प्रचण्डलाई खबर गरेको स्रोतको दाबी छ । केही नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर यसमा कमिकमजोरी भएपनि घटनालाई देशभित्र र बाहिरबाट पुर्व माओबादीमाथि आक्रमण गर्न थालिएकोले गम्भीर हुन भनेका थिए । पुर्व माओबादीलाई कमजोर पार्न महरालाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको नेताहरूको निस्कर्ष थियो । गोप्य सुत्रका अनुसार पश्चिमाहरू पुर्व एमाले र नेपाली काँङ्रग्रेसका केही युवा नेताहरू शान्ती प्रक्रियादेखि पछिल्लो महराप्रकरण उनिहरू लागीपरेको स्रोतको दाबी छ । यसको गतिलो उदाहरण स्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत ६ वटा पस्चिमा कुटनितिक नियोगले महिला हिँसाको बिषय उठाउदै महरा प्रति लक्षित गरि बिज्ञप्ति जारी गरेको थिए । छलफलमा सहभागीहरू मध्ये संसदिय दलका नेता प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसलाई गम्भिर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छन । उनले भने निजीमामलासंग जोडिएको सांस्कृतिक कमिकमजोरी को बारेमा जसरी बक्तब्य जारी भयो त्यो नै पस्चिमाहरूको षडयन्त्र हो ।
पस्चिमाहरूले नेपालदेशलाई युद्दभुमिमा परिणत गर्न खाजिरहेको एनआरयन रेडियो नेपाली बहसमा गुरुङले आरोप लगाएका छन । परिघटना घटिसमेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र पस्चिमा केही मुलुकहरुका कुननिति निकायले जुन बक्तब्य निकाले त्यसले नै यहानीर षडयन्त्र छ भन्नेकुरा पुष्टि गरेको समेत बताएका छन ।
नेता महरा चिनसंग नजिक भएका कारण पनि षडयन्त्रपुर्ण ढंगले घटनालाई उच्चालिएको उनिहरूको ठम्याई छ ।
३९ मिनट अगाडि